Ngwọta naghachi keerughi Photos si Canon PowerShot
> Resource> Naghachi> Otu Easy Ngwọta naghachi Photos si Canon PowerShot
Ọnọdụ adịkwa foto site na Canon PowerShot
1. mmadụ na mberede ehichapụ niile foto site na Canon PowerShot igwefoto.
2. Were ọtụtụ photos mgbe Canon PowerShot igwefoto e-egbu maramara a ala batrị akara. Mgbe ahụ nwetara a 'Kaadị ebe nchekwa Error' ozi.
3. Mgbe ideturu foto gị Canon PowerShot na kọmputa, e nwere ụfọdụ photos gwụsịrị-depụtaghachiri. Ọzọkwa, i nwere ike ịhụ ha ma site na kọmputa ma ọ bụ igwefoto.
E nwere ndị ka ndị ọzọ na-ejighị n'aka ọnọdụ e wezụga ndị metioned n'elu, dị ka kaadị ebe nchekwa na Canon PowerShot Nwela emerụ ma ọ bụ photos aghọ keerughi. Bụ n'ebe ọ bụla ngwọta naghachi ndị keerughi foto site na Canon PowerShot igwefoto?
Otu mfe ngwọta naghachi ehichapụ / furu efu foto site na Canon PowerShot
Mgbe nke a ụdị kaadị ebe nchekwa njehie nsogbu itịbe gị, echegbula. Wepụ na kaadị ebe nchekwa gị Canon PowerShot na jikọọ na ya ka ndị ọzọ dijitalụ ese foto ma ọ bụ ekwe ntị ma ọ bụ kọmputa (mma site a kaadị agụ). Mgbe ahụ ego ma kaadị bụ OK ma ọ bụ mgbe ha nọ na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ka na-adịghị arụ ọrụ? Mgbe ahụ na ụzọ kasị mma ego ọ bụrụ na gị photos (ehichapụ ma ọ bụ keerughi) nwere ike natara bụ ịgbalị a Canon foto mgbake usoro. Ka ogologo dị ka SD kaadị gị Canon PowerShot nwere ike achọpụtara site kọmputa gị, Ohere ka undelete Canon dị nnọọ elu. Ma tupu eme ihe ọ bụla, ị chọrọ nwụnye a data mgbake omume na kọmputa gị na mgbe ahụ jikọọ gị Canon PowerShot kaadị ebe nchekwa na ya.
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows OS, na-agbalị Wondershare Photo Recovery - a mgbake omume na ike naputa photos, videos na music furu efu site na kọmputa ike mbanye, na igwefoto dijitalụ kaadị ebe nchekwa na flash mbanye wdg wezụga ya, ọ pụkwara naghachi foto site na Canon furu efu enyefere Canon igwefoto ka kọmputa.
Ọ bụrụ na ị na-eji Mac OS X, mgbe ahụ, na-atụgharị Wondershare Photo Recovery for Mac, nke na-arụ ọrụ ahụ.
Atụmatụ: Ị na-agbali na-ọhụrụ photos n'ihu gị naghachi furu efu foto site na kaadị ebe nchekwa gị, na-etinye na kaadị ebe nchekwa ala ebe bụrụ na ihe ọ bụla mebiri ọnọdụ ga-eme.
Ị na mkpa na-3 nzọụkwụ ịrụcha Canon PowerShot mgbake
1. Jikọọ kaadị ma ọ bụ igwefoto na kọmputa, na ike iṅomi ya mgbe launching usoro ihe omume.
2. Preview na-elele recoverable foto na scanned si.
3. Họrọ foto na pịa naghachi ha.
Nti: mgbe n'izoputa anyi natara photos, adịghị azọpụta ha na mbụ Canon powershot ọzọ. Họrọ otu ọzọ media nchekwa ma ọ bụ na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Video nkuzi nke Canon Powershot foto mgbake